China Cell Phone Pulp Tray orinasa mpamokatra sy mpanamboatra. Dingtian
Fantsona pulp finday
Ny fantson-taratasy amin'ny telefaona finday dia tsara amin'ny shockproof, proof-hamandoana, anti-static, sns.
Amin'ny ankapobeny dia ao anaty fonosana anatiny no misy ilay fitoeran-taratasy. Izy io dia ampiasaina hanamboarana ny toerana misy ny telefaona, hisorohana ny fandondonana an-telefaona. Nanamboatra marika taratasy maromaro ho an'ny telefaona finday izahay, izay azo noforonina haingana sy mahomby kokoa ho an'ny telefaona findainao.
Fomba hafa, azafady mifandraisa aminay amin'ny fanaingoana!
1. Amin'ny alàlan'ny bobongolo mba hamoronana karazana famaritana isan-karazany, endrika sarotra amin'ny vokatra, mba hahafahany mampifanaraka ny endrik'ireo finday isan-karazany, mora ny mitoka-monina, miaro ny fifandonana.
2. Manana tanjaka sy henjana mifanaraka amin'izany, izay mahatonga azy io hiaro sy hiaro azy tsara.
3. Azo noforonina ihany koa amin'ny alàlan'ny lelafo mijanona, anti-static ary fananana hafa.
4. Fitaovana maro be sy fampiasana fako, miaraka amin'ny tombony azo avy amin'ny fiaraha-monina.
5. Azo apetaka ny lasitra taratasy mba hanamorana ny fikirakirana, ny fitehirizana ary ny fanarenana, izay mampihena ny vidin'ny fitaterana.
asa:Arovy ny vokatra elektronika amin'ny fifandonana, ary ataovy fonosana avo lenta ny entana.
Akora ilaina: pulp fary, pulp hazo, pulp volomparasy, sns
Hateviny: tsy mihoatra ny 1.2mm
Ny lanja sy ny habe: mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa
Endrika: Araka ny firafitry ny vokatra
Volavola: fangatahan'ny mpanjifa na izahay manampy amin'ny famolavolana
Fonosana ： kitapo PE + baoritra fanondranana mahazatra na fangatahanao
Tombony: tontolo iainana sy voajanahary
Ampiasaina amin'ny fitazonana ny karazana fonosana fantsom-pifandraisana finday, serivisy fitehirizana finday sy fonosana ary fiarovana.
Ny fizotry ny famokarana ：
Previous: Kapam-penina Capacitance
Pulp Tray Ho an'ny telefaona finday
Fitaovana informatika Pulp Tray
Tratra Hard Hard disk
Tray borosy nify elektronika
Ireo karazan-doko rehetra famonoana pulp Holder, Boaty fonosana sakafo, Taratasy fametahana kilasy sakafo, Vata famonosana sakafo haingana, Fandokoana fonosana fonosana fandokoana, Fako Pulp voaoloko,